Qaybaha kuleylka kuleylka
Haa, waxaan u baahan nahay amarrada caalamiga ah oo dhan si ay u lahaadaan tirada ugu yar ee amar bixinta. Haddii aad rabto inaad dib u iibiso laakiin aad u tiro yar, waxaan kugula talineynaa inaad fiiriso bartayada internetka
Waa maxay celceliska waqtiga hoggaaminta?
Saamiyada, waqtiga hogaaminta waa ilaa 7 maalmood. Soo-saaris ballaaran, waqtiga hogaamintu waa 20-30 maalmood kadib marka la helo lacag-dhigashada. Waqtiyada hogaaminta ayaa dhaqan gala marka (1) aan helno deebaajigaaga, iyo (2) waxaan heynay ogolaanshahaaga ugu dambeeya alaabadaada. Haddii waqtiyadeena hogaaminta aysan ku shaqeynin waqtigaaga kama dambeysta ah, fadlan ka gudub shuruudahaaga iibkaaga. Xaaladaha oo dhan waxaan isku deyi doonnaa inaanu ku haqabtiro baahiyahaaga. Xaaladaha badankood waan awoodnaa inaan sidaas yeelno.
Waxaad ku bixin kartaa lacagta akoonkayaga bangigayaga, Western Union ama PayPal:
30% ayaa horay loo sii dhigaa, 70% dheelitirka dhanka ah nuqulka B / L.
Waxaan damaanad qaadeynaa agabkeenna iyo shaqadeena. Ballan qaadkeennu waa qanacsanaanta alaabadayada. Caymis ama majiro, waa dhaqanka shirkaddayada in wax laga qabto oo la xalliyo dhammaan arrimaha macaamiisha si loo qanco qof kasta
Miyaad damaanad qaadeysaa gaarsiinta amaan ah oo aamin ah alaabooyinka?
Haa, waxaan had iyo jeer isticmaalnaa xirmooyin dhoofinta tayo sare leh. Waxaan sidoo kale u isticmaalnaa kaydinta khatarta khaaska ah alaabada khatarta ah iyo maraakiibta keydka qaboojiyaha oo ansax ah alaabada xasaasiga ah. Baakadaha khaaska ah iyo shuruudaha xirxirka aan caadiga ahayn waxay ku imaan karaan lacag dheeraad ah.
Xor ayaad u tahay inaad nala soo xiriirto. Waxaan had iyo jeer diyaar u nahay inaan ku caawino.
Hadda na soo wac: 13771465527
Cusbooneysiin Bilaash ah
Tilmaanta - Alaabada la soo Bandhigay - Khariidadda Goobta